I-Ndovu House, Conservancy - I-Airbnb
I-Ndovu House, Conservancy
Maungu, Taita Taveta, i-Kenya
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Lore
Indlu enhle ye-breezy enendawo yokuphumula egunjini eliphezulu enombono omuhle phezu kwe-Conservancy. Ithule kakhulu, iyimfihlo, iyingqayizivele! Siyalithanda ikhishi elivulekile elixhuma ku-bar yangaphandle nomgodi womlilo. Indawo ekahle kakhulu yomndeni noma yokuvakasha kwabangane.
Indlu yakhelwe ngezinto eziningi zemvelo, amatshe e-Galana, izinkuni eziningi nophahla oluhlaba umxhwele lwe-Malti. Indawo yokudlela yendlu ivuleke ngokuphelele engadini. Indlu ifakiwe ocingweni oluzungeze i-Valuli Camp ukuze kugcinwe izilwane zasendle ziphumile.
I-Ndovu House isethwe maphakathi ne-Conservancy. Indlu iyingxenye ye-Valuli Camp kodwa izivakashi zethu zihamba ngokuzimela, zihlala kule ndlu yangasese. I-Long Conservancy yindawo enhle futhi yasendle, izihlahla zangempela zase-Afrika. Ukulalela ebusuku uzungeze umgodi womlilo cishe uzozwa izingonyama zibiza, i-bumls hoot noma i-hyenas whoop.
Siqasha izisebenzi zasendlini ezizokwenza imibhede futhi zihlanzeke nsuku zonke futhi zikusize ngokugeza izitsha. Uma ufuna, ungaqasha umpheki wesikhathi esigcwele ukuze wenze ukudla kwakho.